Ingiriiska oo Somaliland ka reebay Shirka London,sababta | Baydhabo Online
Ingiriiska oo Somaliland ka reebay Shirka London,sababta
Dowladda Ingiriiska ayaa maamulka Somaliland ka reebtay ka qeyb galka shirka arrimaha Soomaaliya ee Bisha May ka furmaya Magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska.
Dowladda Ingiriiska ayaa Somaliland ku eedeysay in ay fashilantay dimuqraadiyadda Somaliland kadib markii dob loo dhigay doorashada Somaliland.
Waxaa ay Dowladda Ingiriisku ku doodday in shirkaasi loogu talagalay in ay ka qeybgasho xukuumad cusub oo ka socota Somaliland sidaas darteedna Somaliland laga reebay shirkaas maaddaama ay qaban weysay doorashooyinka madaxtinimada oo loo ballan sanaa Bisha April.
Safiir ku xigeenka Ingiriiska ee Somaliya ,Andrew Allen. oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Somaliland ay dimuqraadiyadeeda hoos u dhacday dowladda Ingiriiskana ka reebtay ka qeybgalka shirkaas.
Shirka 11-ka May ka dhacay london ayaa waxaa ka qeyb gelaya Dowladda Soomaaliya iyo Waddamada Qaaraanka bixiya ee taageera Soomaaliya,waana shirkii 2aad oo noociisa oo kale ah oo ay marti gelineyso Dowladda Ingiriiska.